Nzira yekuziva iyo ion mhando ye polyacrylamide vagadziri uye vanotengesa | Oubo
Ungaziva sei iyo ion mhando ye polyacrylamide
Zvinoenderana nerudzi rweion, polyacrylamide inogona kukamurwa kuita: anionic polyacrylamide ,cationic polyacrylamide uye isiri-ionic polyacrylamide.
Iyo inogadzira polyacrylamide inozivisa sei mhando ye polyacrylamide ion:
Polyacrylamide vagadziri vane vakapakata nyanzvi mumarabhoritari. Kunze kwekuyedza zvehunyanzvi zviratidzo zvezuva nezuva zvigadzirwa, rabhoritari basa rinodawo kuyedza ekunze sampuli. Kazhinji, kana uchigamuchira muyenzaniso wekunze, iyo ion mhando yechigadzirwa inofanirwa kutanga yaonekwa. Saka sei kusiyanisa ion mhando? Mhinduro ndeiyi: izvo zvehunyanzvi zviratidzo zvekutsvaga zvekunze sampuli. Anionic polyacrylamide uye isiri-ionic polyacrylamide inosiyaniswa nekuona degree rehydrolysis. Dhigirii rehydrolysis ye anionic polyacrylamide yakatenderedza makumi maviri neshanu, uye mwero wehydrolysis yeasina-ionic polyacrylamide yakatenderedza 5. Cationic polyacrylamide inosiyaniswa nekutsvaga iyo degree degree, uye iyo degree degree yeakaoma poda zvigadzirwa zvinowanzochinja pakati pe10-60.
Maitiro ekuziva mhando ye polyacrylamide ion kuburikidza neyakareruka kuyedza:
Nzira yekusiyanisa ion mhando ye polyacrylamide kana vashandi vari mune yekutengesa saiti kana vasina michina yekuyedza? Kutanga, tinofanirwa kuve nemuenzaniso weanionic polyacrylamide uye cationic polyacrylamide, uye nekunyungudutsa izvi zvigadzirwa zviviri zvakasiyana kuti zvishandiswe. Wobva wanyungudutsa chigadzirwa chinoda kuona iyo ion mhando, uye uchisiyanise kuburikidza neye yin uye yang reaction. Dururira iyo yakanyungudutswa anionic polyacrylamide mhinduro mune chigadzirwa chigadzirwa kuti chiongororwe. Kana huwandu hwakawanda hwechena flocs ukaonekwa, zvinoreva kuti muyedzo wakaedzwa ndeye cationic polyacrylamide. Kana pasina chekuita, zvinoreva kuti haina-ionic kana anionic. Wobva waziva neiyo cationic polyacrylamide mhinduro, mashoma eefcs anoratidza kuti chigadzirwa chakaedzwa hachisi-ionic polyacrylamide, uye huwandu hwakawanda hwe flocs hunoratidza kuti muyedzo wakaedzwa ndeye anionic polyacrylamide.
Kukosha kwekuziva mhando yepolyacrylamide ion:
Kana iwe usiri kuziva kuti chii chigadzirwa chiri kushandiswa kufuratira pane saiti, kuratidza mhando ye polyacrylamide ion kunogona kubatsira vashandisi kukurumidza kuongorora mamodheru uye kutsvaga zvigadzirwa zvinoenderana nemvura irimo-saiti nekukurumidza.
Dzidza kuona mhando yepolyacrylamide ion, kuitira kuti vashandisi vanzwisise zvirinani chigadzirwa, vashandise chigadzirwa pamwe nezvigadzirwa zviri nani, vazvizive, uye chenjera nevatengesi vakaipa vanonyengera vatengi
Basa re flocculant mune tsvina kurapwa
Tsanangudzo yekushandiswa kwepolyacrylamide mu t ...
Kushanda kwePolyelectrolyte muMu ...
Kushanda kwePolyacrylamide mukuchera
Maitiro ekuziva iyo ion mhando ye polyacryl ...